Accueil > Gazetin'ny nosy > Fitsarana malagasy : tsy raharahian’ny fanjakana frantsay
Fitsarana malagasy : tsy raharahian’ny fanjakana frantsay
Niteraka resabe teo amin’ireo mpanara-baovao sy ireo mpampiasa ny tambazotran-tserasera sosialy ny resaka nataon’ilay teratany frantsay Houcine Arfa tamin’ny mpanao gazetin’ny Le Parisien. Miparitaka amin’ny tambazotran-tserasera moa ny horonan-tsary mirakitra izay resaka nataon’i Houcine Arfa izay, mikasika indrindra ny fomba nandosirany tany Frantsa avy teto Madagasikara. Ity teratany frantsay ity izay milaza mazava fa misy tompon’andraikitra ara-panjakana vitsivitsy no nomeny vola mba ahafahany mitsoaka any amin’ny firenena misy azy, anisan’ny voatonona tamin’izany ny minisitra ny Fitsarana malagasy, Alexandrine Elise Rasolo. Nambaran’i Houcine Arfa mazava tsara tamin’ilay mpanao gazetin’ny Le Parisien fa nomeny vola 70.000 Euro na 250 tapitrisa ariary ny minisitra ny Fitsarana mba hamela azy hitsoaka ny fonja ary handositra any Frantsa. Tsy fantatra aloha hatreto ny tena fahamarinan’io ampamoaka nataon’ingahy Houcine Arfa satria raha tena marina tokoa izany dia tokony ho samborina ary hampidirina am-ponja ramatoa Alexandrine Elise Rasolo. Raha any amin’ireo firenena mandroso no misy trangan-javatra tahaka izao, izany hoe raharaha maloto mahavoakasika tompon’andraikitra ara-panjakana ambony, dia tsy maintsy misokatra ny fanadihadiana lalina avy amin’ny fitsarana ary tsy hamelan’ny mpitsara mandray an-tanana ny raharaha raha tsy mivoaka ny marina rehetra. Mifanohitra amin’izany ny eto Madagasikara satria na inona na inona vaovao mivoaka, na inona na inona “dossier” maloto mahavoasaringotra mpitondra fanjakana na olona akaikin’ny mpitondra, dia tsy misy ny andraikitra raisin’ny fitsarana na ireo sampan-draharaham-panjakana voakasika amin’izany ka tsy mahagaga raha tsy mety foana ny kolikoly avo lenta isan-karazany. Fa etsy ankilan’izany, lafin-javatra iray mampametra-panontaniana mikasika ity raharahan’i Houcine Arfa ity ihany ny fihetsika ny fanjakana frantsay. Nilaza ny minisitra ny Fitsarana raha nanao valan-dresaka ho an’ny mpanao gazety, tamin’ny herinandro lasa teo, fa efa namoahana didy fampisamborana iraisam-pirenena na “mandat d’arrêt international” ity teratany frantsay voalaza fa nikasa hamono ny filoham-pirenena ity kanefa mandrak’ity ny androany, tsy mbola nisambotra azy akory ny fanjakana frantsay. Raha ny fantatra anefa dia tsy miafina na misitri-belona any Frantsa any i Houcine Arfa fa miaina milamina ary malalaka toy ny olon-drehetra. Mbola mahavita mitafatafa amin’ny mpanao gazetin’ny Le Parisien aza ny tenany ary tsy matahotra ny ho samborina mihitsy. Ny azo andikana izany dia toy ny tsy misy amin’ny fanjakana frantsay izany didy fampisamborana iraisam-pirenana ho an’i Houcine Arfa izany, ary tsy misy hiraharahian’ny fanjakana frantsay ny fitsarana malagasy. Tsy zavatra tsy misy dikany anefa ny heloka hiampangana ity teratany frantsay ity fa fikasana hamono ny filoham-pirenena malagasy, izay heverina fa heloka goavana. Raha i Emmanuel Macron na i Donald Trump angamba no nisy nikasa hamono ka tafatsoaka any amin’ny firenen-kafa ilay voarohirohy, azo inoana fa ora ihany no isaina dia voasambotra rehefa mivoaka ny didy fampisamborana iraisam-pirenena. Ny mahagaga anefa dia misy tsara izao ny fifanaraham-piaraha-miasa eo amin’ny fanjakana malagasy sy ny fanjakana frantsay eo amin’izay resaka fitsarana izay.
Fisolokiana avo lenta: Vola amina miliara maro no azon’izy mivady
Tsy kely lalana marina ny ratsy, indrindra fa eto amin’ity Madagasikara ity. Mpivady teratany malagasy, mitondra ny anarana hoe Razafindratovo Mamy Berthin sy Catiuca Rojo, no voasambotry ny zandary ary nampahafantarina ny mpanao gazety teny amin’ny borigady eny Betongolo, omaly. Raha ny fanazavana azo dia olona am-polony maro no efa voasolokin’ireto mpivady ireto ary vola amina miliara maro no efa azon’izy ireo raha atao ny kajikajy. Marihana fa tsy Malagasy ihany no lasibatr’izy mivady fa hatramin’ireo teratany vahiny dia misy ihany koa no tratran’izy ireo. Mitonon-tena ho mpiantok’asa na “entrepreneur” ingahy Razafindratovo Mamy Berthin sy ny ramatoa vadiny rehefa misoloky olona ary raha ny voalaza dia mora amin’izy ireo ny mandresy lahatra an’ireo olona solokiany. Tsy olon-tsotra ihany no voasoloky raha ny fantatra fa hatramin’ny mpitsara sy mpitandro filaminana. Betsaka moa ny olona efa nitory azy ireo tany aloha tany saingy ampitahorin’izy mivady amin’ny hoe fahafantarana olona ambony sy tompon’andraikitra ambony eo anivon’ny fitsarana. Efa nampidirina am-ponja vonjy maika ireto mpivady ireto rehefa niakatra fampanoavana voalohany, ny 23 desambara lasa teo, saingy mbola betsaka ny fitoriana vaovao voarain’ny zandary ka naverina nohadihadiana indray.